Beeraha iyo daryeelka xiga | November 2019
Ugu Weyn Ee Beeraha iyo daryeelka xiga
Beerashada iyo daryeelka xiga - Mucjis qurux badan oo xagaaga ah
Waa wax aan macquul ahayn in la helo dadka aan wax cunin oo aan jeclayn midhaha khudaarta. Tani waa miro aad u dhadhan leh oo keena farxad iyo faa'iidooyin caafimaad. Si aad u hesho geedka khudaarta khudaarta beertaada waxaa loola jeedaa in aad naftaada dhadhan aad u dhadhan leh u sameysid xagaaga, macmacaanka gaarka ah, jilicsan iyo macaanka jiilaalka mudo dheer.
Apricot: doorashada ee noocyo jiilaalka-adag oo loogu talagalay gobolka Moscow
Waxaa loo tixgeliyaa in khudaarta cagaaran ay tahay dhaqan koonfureed. Si kastaba ha ahaatee, bannaanka u horey u heshay siyaabo aad u koraan geedkan quruxda badan ee meelaha qabooba. Gobolka Moscow - aaggu waa mid aad u qabow, miraha halkan waxay gaari karaan -30 ° C. Sababtoo ah xaaladaha cimilada noocan oo kale ah, noocyada ugu wanaagsan ee abrikotka ee gobolka Moscow ayaa noqon doona noocyo jiilaal-adag oo ah abrikot.
Noocyada daryeelka ee noocyada khudaarta cagaaran "Cadaan-madow"
Waxa kaliya ee aan ku celineynin jilayaasha si ay dadka ula yaabaan guulahooda. Tusaale ahaan, adiga iyo aniguba waxaan caadaysteen abaarta caadiga ah ee huruudka ah, laakiin waxay soo baxday in tani ay ka fog tahay kala duwanaanta midabka. Sidaa daraadeed, waxaan u soo jeedinaynaa inaad u fiirsato sifooyinka khudaarta "Cadaan madow", sharaxaadda taas oo hubaal ah inaad ku yaabiso.
Khudaarta madow: beeritaanka iyo daryeelka ee "Kubaan madow"
Labadaba bilowga ah iyo bannaanka u khibrad badan waxay leeyihiin rabitaan dabiici ah si ay u koraan wax aan caadi ahayn beerahooda. Tani waxaa loo tixgelin karaa khudaar madow, oo magaceeda ku soo gashay midabka aan caadiga ahayn ee miro. Khariidadda "Kuban madow": sharaxaad Ka hor intaanad go'aansan inaad kobciso noocyo kala duwan oo khudrado madow ah "Kuban madow", waa inaad barataa sharaxaadkeeda si loo fahmo xaaladaha loo baahan yahay in lagu abaabulo dalagga, sida loo daryeelo iyo waxa bacrimiya.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Beeraha iyo daryeelka xiga 2019